सिल्टल: जाभास्क्रिप्टको साथ डेटा स्क्रैपिंग
1. किमोनो ल्याब्स:
2. JSON फ्रेम:
JSON फ्रेमको साथ, तपाईं JSON र CSV फाइलहरूबाट डाटा निकाल्न सक्नुहुनेछ।. यसले HTML कागजातहरू र पीडीएफ फाईलहरू सजिलैबाट जानकारी स्क्रैप गर्दछ. साथै, तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरू मार्फत नेविगेट गर्न यो जाभास्क्रिप्ट ढाँचा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यसले आफ्नो कार्यलाई छिटो गति र महान सटीकतामा प्रदर्शन गर्छ, तपाईंको समय र ऊर्जालाई हदसम्म बचत गर्दछ.
3. स्क्रिन स्क्रैपर:
स्क्रिन स्क्रैपरको साथ, तपाईं केवल केहि मिनेटमा सटीक डेटा निकासी सहित विभिन्न कठिन कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ।. यो मितिको सबै भन्दा राम्रो र अधिक व्यापक जाभास्क्रिप्ट ढाँचामा छ. स्क्रिन स्क्रैपर मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाइँसँग उत्कृष्ट प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू र जाभास्क्रिप्ट, पाइजोन र सी ++ को पर्याप्त ज्ञान छ. यसको अतिरिक्त, तपाईं यस ढाँचाबाट लाभान्वित गर्न XML र HTML को आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ. यसले एचटीएमएल कागजातबाट जानकारी स्क्रैप गर्दछ, र तपाइँले यो सेवा Citrix वा अर्को समान प्लेटफार्मको साथ परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ. एक पटक डाउनलोड र स्थापना भएपछि, स्क्रिन स्क्रैरले धेरै कार्यहरूसँग कार्य गर्दछ. यो सानो र मध्यम आकारका व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छ. तपाईंसँग यो ढाँचा राम्रो तरिकामा प्रयोग गर्न मूल कोडिङ कौशलको आवश्यकता पर्दछ.
5. आयात गर्नुहोस्. io: